Finday ho maimaim-poana, tsy manaiky izany sy tsy misy fisoratana anarana - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Ny fifandraisana amin'ny finday niova be, araka ny ara-teknika fahaiza-manaoIty fitaovana ity dia tsy hoe fotsiny noho ny fitandremana ny fanendrena ao amin'ny fohy indrindra azo atao ny fotoana, tara ny fotoana sy ny fifandraisana amin'ny namana, fa koa noho ny isan'andro ny mpiara-mitory, solosaina findainy sy marina ny mpanao asa tanana. Araka ny vaovao ao amin'ny izany, izany no azo atao ihany raha toa ka misy ny lehibe ny fandavana amin'ny ampahany ny tanana. Midika izany fa ny tompony dia mety ho mora hita amin'ny fampiasana finday. Ny finday no fomba tsara mba hamonjena ny finday raha toa ianao very. Na izany aza, fa araka ny tokony ho toerana ao, misy fepetra sasany tsy maintsy ho nihaona. Ny finday no tena zava-dehibe ny toe-javatra, raha tsy izay dia mora tsy azo atao ny toerana misy ny finday. Raha misy hafa takiana, ny teknolojia tokony hilalao ny anjara toerany ao aminà toerana. Ohatra, raha toa ianao ka manao ny GPS toerana ao, ianao koa dia mila mampihetsika ny GPS. Tamin'ny taona modely fa tsy mbola manana asa ity, io toerana io dia na dia tsy ao anatiny ny toerana dia foana.
Na inona na inona ny fepetra takiana ara-teknika, aza hamaivanina ny fepetra ara-dalàna.
Na dia eo aza ny lalàna sy ny mifandray fialam-boly ao amin'ny faritra, fanekena, raha tsy loza, dia ilaina amin'ny fampiharana ny lalàna na ny toerana misy ny olona ho fiarovana mpitari.
Mahita ny finday maro raha tsy misy fanekena iray amin ireo zavatra ireo. Araka ny lalàna ny olona, amin'ny maha-anisan'ny mpiaro ny zon'olombelona, ny olona iray ny fahafahana tsy azo ferana. Na izany aza, hatrany ao amin'ny Aterineto, ny mety izany aminà toerana. Raha mbola tsy hahatonga na mamoha ny faniriana hanao fanoherana avy ny olona tsirairay, ny vokany dia tsy naka an-kaonty.
Ny zava-misy izany dia midika ihany koa fa ny finday-toerana dia toy izany koa mahay fa ny mifanaraka amin'izany ny olona tsy mandalo izany amin'ny alalan'ny.
Na izany aza, dia ilaina ny milaza fa ny toerana ao no ampiharina sy ny olona dia tsy maintsy nametraka fitarainana tany, izany dia mety hitarika ny hetsika ara-dalàna, fa ity ihany no mitranga ao anatin'ny toe-javatra.Iray hafa izay mila fanazavana na dia mitady ho an-tserasera tolotra sy ny indray mipi-maso ny finday-toerana, lalana, miaraka na tsy misy ny tolo-fisoratana anarana.
Ireo tolotra omena isan-karazany ny finday mpandraharaha
Ho an'ny mpitari-dalana intsony ny maro, tokony hieritreritra tsara momba izay misafidy. Fa izany koa ny zava-misy fa tsy tokony hanome fampahalalana bebe kokoa noho ny dia tena ilaina, satria amin'izao fotoana izao tsy misy zavatra vita mialoha ny mpitandro ny fanangonana antontan-kevitra ireo manampahefana. Amin'ny toe-javatra sasany, mametraka ny mpandraharaha voafetra ny finday maro mba handefa ny takiana toerana vokatra.
Ankoatra izany, ho an'ny angon-drakitra-teny, dia mety ho latsaka ao ny famandrihana fandrika, na dia tamin'ny zava-nitranga ny rano indray mitete, ny vola lany afaka azo atolotra ny finday.
Raha vao voalohany toetry ny fahatairana sy ny fikarohana dia niteraka ianao, dia tsy maintsy manao zavatra avy hatrany. Mba ahafahany manara-maso amin'ny finday, mila manao ny fanendrena mialoha, afa-tsy ny toerana misy ny telefaonina dia afaka manolotra bebe kokoa. Ireo no karazan-tsaha ny asa natao sy ny mandroso eo amin'ny sehatry ny finday ny fifandraisana sy ny fiarovana. Tena tsara fantatra anarana ao amin'io faritra io, icloud avy amin'ny Apple-Trano. Ny mahatsara ireo fandaharan'asa ireo dia mihazakazaka eo amin'ny fiainany sy ny tsy hita avy hatrany ny mpampiasa, izay no tena zava-dehibe raha ny halatra. Mba mamaly ny fanontaniana na ny an-tariby an-tserasera na ivelan'ny aterineto, mila mianatra bebe kokoa momba ny fandaharana ho an'ny advanced users. Tampoka momba ny finday foana an-tserasera, satria afa-tsy ao amin'ny Aterineto ireo mpanome tolotra, ary noho izany, manome ny mampifandray ny finday an-tserasera.
Raha toa ianao dia tsy voafetra ho tsotra finday toerana ao, fa raha tianao ny mampiasa isan-karazany ny fandaharana fa miantehitra amin'ny rindrambaiko, ianao dia mila mametraka ny voalohany.
Ny fifandraisana ihany koa ny tsy voahilika. Na ivelan'ny aterineto ireo fandaharana azo niteraka, - toerana sy ny fifandraisana dia foana ny natao nandritra ny antso an-tariby na amin'ny alalan'ny zanabolana TV-dalana, izay kosa dia mitaky ny Aterineto. Na inona na inona ny laharana finday sy maharitra, izay mitovy foana, na, fara fahakeliny, tena mitovy amin'ny mpampiasa, ny voka-pikarohana dia tsy mitovy. Ny marina ny famaritana ny toerana misy azy fa miovaova arakaraka ny rafitra izay noforonina.
Ny mpampiasa dia tsy fitarihana izay rafitra ampiasaina ho an'ny tsirairay ny toerana.
amin'ny chat roulette aterineto amin'ny finday Chatroulette tsy misy dokam-barotra ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana sy maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat tsy voafetra ho maimaim-poana manambady vehivavy te-hihaona narahi-toerana Fiarahana ny lahatsary amin'ny chat roulette fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat room Mampiaraka maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana Chatroulette velona stream lehilahy